रेडियोमा आरएफएफ - इवार्ड फाउण्डेशन - प्रेम, सेक्स र इन्टरनेट
मेरी शार्पलाई सामेल हुन आमन्त्रित गरियो सारा ब्रेट रेडियो5लाइभ NHS मा यौन थेरापी उपचार आवश्यक युवाहरूको संख्या मा हालसालै नाटकीय वृद्धि छलफल गर्न।7अक्टूबर 2019 मा यस छलफलमा हामी यो जान्छौं कि 19 को यौन उपचार उपचारको लागि माग द्वारा मात्र केही वर्षमा तीन गुणा बढ्यो। 2015 देखि 2017 को अवधिमा 1,400 NHS रेफरलहरू युवा व्यक्तिहरूलाई यौन थेरापिष्टहरूको लागि हुन्थे। अर्को अवधिमा 2017 बाट 2019 मा यो लगभग 4,600 मा बढेको छ। यस परिवर्तनलाई ड्राईभ गर्नमा अश्‍लील सामग्री प्रयोगको भूमिकाको बारेमा मरियमको विचारहरू सुन्नुहोस्।
पीएम प्रमुख प्रमुख समाचार र रेडियो4मा कार्यक्रम, यूकेमा प्रसारण र वास्तवमा सम्पूर्ण संसारमा। सोमबार 1st अप्रिल 2019 इवान डेविस पत्रकारले 6-मिनेट खण्ड पेश गर्नुभयो क्रिस वेल्सन यूकेको उमेर प्रमाणिकरण प्रणालीमा बालबालिकाका लागि सजिलो पहुँच अनलाइन अश्लील पोर्नोग्राफी कम गर्न प्रणाली। मरि शेर्पा, टीआरएफ को सीईओ, भन्छन् किन यो कानून अझै अझै महत्त्वपूर्ण छ, भले ही कुनै सिद्ध छैन।
बीबीसी रेडियो स्कटल्याण्ड हाम्रो स्थानीय सञ्जाल हो। TRF धेरै शोहरूमा देखा पर्यो र तपाईं सधैं हाम्रो लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ बीबीसी ध्वनि.
अनलाइन फेशन रिटेलर बूहू.क. का एक विज्ञापनको विज्ञापन मानक प्राधिकरण द्वारा नारा प्रयोग गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो "न्युड्स पठाउनुहोस्" छालाको रंगको लुगा प्रचार गर्न। मेरी शार्प जेस म्याकब्याथ र काइ एडम्स शो मा अन्य टिप्पणीकारहरू 17 अक्टूबर 2019 मा सामिल हुनुभयो जसले बच्चाको संरक्षण दृष्टिकोणबाट न्यायको बुद्धिमत्तालाई हेर्दै थिई।
किशोर यौन सम्बन्धको प्रभाव के हो? मेरी शार्प बलात्कारको संकट स्कटल्यान्डको साथ3सेप्टेम्बर 2019 मा गुड मोर्निंग स्कटल्यान्डमा देखा पर्छिन्। सेक्सटिंग र स्कटल्यान्डको कानूनको बारेमा थप पढ्नुहोस् यहाँ.
यूकेमा उमेर प्रमाणीकरणका लागी सुरुवात मिति घोषणाको साथ, 18 अप्रिल 2019 मा लेर मैक्सवेल संग एक घण्टा लामो फोनमा आईपुगे। निम्न 6-मिनेट हटाउनुहोस् कार्यक्रमको अन्तिम भागमा आफ्ना विचारहरू।
अश्लील बारेमा जवान मानिसहरूलाई कुरा गर्दै मेजरको बारेमा विषय थियो केये एडम्स 20 मार्च 2019 मा। मार्नी शर्पले साराको साथ चित्रित गरेका थिए, जसमा च्यानल4डको-सीरीज "मम्स बनाम पोर्न" को एक म्यूज, एक सल्लाहकार र प्रो-पोर्टेबल कार्यकर्ता जेरी बर्नाटले अर्डर चापनलाई दिए।
सुनेर मरियम शर्पेलाई छोटो भागमा सहमति र पोर्नोग्राफीको बारेमा कुरा गर्दै स्टीफन जर्डिन 15 फेब्रुअरी 2019 मा देखाउनुहोस्।
जन बिटाई 20 नोभेम्बर 2018 मा पोर्नोग्राफी प्रयोग मा एक उत्साहित चर्चा आयोजित। अतिथिहरू मैरी शर्पु थिए, रिश्ते स्किटल्यान्ड र एम्मा केनीबाट एनी चिल्टन।
स्टीफन जर्डिन म्यारा शेर्पा, एक शिक्षक र एक सम्बन्धी आमा संग 17 जुलाई 2018 मा रेडियो स्कटल्याण्ड मिड-बिहान कार्यक्रम मा साक्षात्कार।
मेरी श्री शेरपले रेडियो नेप्सेमा 10-मिनेट स्लॉटमा रेडियो नैपियरबाट इयान म्याकनेली द्वारा साक्षात्कार गरिएको थियो। 27 अक्टोबर 2017 मा अनलाइन प्रकाशित।
स्कटल्याण्ड भन्दा बाहिर रेडियो
मस्कोमा रेडियो स्पट्निन वर्ल्ड सेवाले 11 मिनेटको लागि मैरी शर्पलाई साक्षात्कार गर्यो। साक्षात्कारको समयमा तिनीहरूले इंग्ल्यान्ड र वेल्समा बालबालिकाको यौन दुर्व्यवहारमा खतरनाक वृद्धिमा छलफल गरे। यो9अक्टोबर 2017 मा विश्वव्यापी दर्शकहरूलाई प्रसारण गरिएको थियो।
लियोनमा एलसीसी रेडियोमा यस 3-मिनेट स्पेसमा स्टिग अबेल द्वारा साक्षात्कार गरिएको मैरी शर्पले 21 अगस्त 2016। यो यूके व्यापक थियो।
मार्नी शेर्पाले उत्तरी आयरल्याण्डमा रेडियो उल्स्टरमा स्टेफन नोलनसँग एक 18-मिनेट वार्तालापमा अश्लील जागरूकता प्रशिक्षणमा छलफल गर्दैछ।
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ यदि तपाइँ स्टेफन नोलनको टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा थप कुराकानीहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने।